Adoo ku arkaya dunidda isha mid kale, laakiin aan ahayn isha ku haysa ishaada. • Dawooyinka Inc.eu
Si aad u aragto kuxidid isha isha kale, laakiin aan isha ku haysa ishiisa.
Farriinta farriinta: Column - Kaj Hollemans (KHLA)
3.Horumarinta caalamiga ah ee ku saabsan CBD iyo cannabis
4.Viva la Revolución! Qaado tusaale tusaale u ah Mexico.
5.Kaabbaha fareebka ma aha mid caws
6.Daroogadu waa dambi sida ay sheegeen walaalaha “House”
7.Tripsters waxay noqdaan hibo
8.Cawska ee hogaanka horjoogsanaya
9.Tijaabinta weedka ee wadarta
10.Bariga, galbeedka, beerashada guriga ugu fiican
11.Waxtarrada ka-hortagga daroogada ee ka timid naxariis iyo aqbalid
12.Mamnuucidda gaaska qosolku xalka ma ahan
13.Xagaaga ee Daawooyinka
14.Farriinta dowladda ee ku saabsan haramaha gobolka waa cayil
16.Calaamadaha tayada CBD
17.Si aad u aragto kuxidid isha isha kale, laakiin aan isha ku haysa ishiisa.
19.Faa'iidooyinka la sheegay ee mamnuucista daroogada
20.Yaraynta waxyeelada iyada oo cadaadiska sii kordhaya
21.Daroogooyinka iyo corona
22.Qaabka loo wajahayo qaran dumiska waa erey kale oo loogu talagalay dagaalka daroogada
23.Ku saabsan siyaasadda MDMA: Inaad Ka fikirto (Tanka) ama inaadan ka fikirin (taangiga)
24.Maxay qorshooyin qurux badan ay xisbiyada siyaasadeed ee Nederland la yimaadeen markay tahay siyaasada daroogada?
25.Sharci-dajinta xashiishku jawaab ma u tahay dhibaatada corona?
26.Siyaasadda daroogada 2.0
27.Saddex-xagalka Amsterdam: riyo mise riwaayad?
28.Sharciga Xashiishka, ma imanayaa mise maya?
29.Siyaasadda daroogada: Peter "Regulate" de Vries iyo mudanayaasha baarlamanka oo qabatimay mamnuucista
Nederland - waxaa qoray Mr. Kaj Hollemans (KH Talo Sharci) (@KHLA2014).
1 Macluumaadka iyo ka hortagga
2 Daawooyinka naqshadeeyaha
3 Dukaamada smart
Sida ku xusan warbixin sanadeedka 2019 ee Kormeerka Maandooriyaha Qaranka in la daabacay usbuucii hore wuxuu leeyahay wadar ahaan in kabadan 1 milyan oo reer Dutch ah oo da'doodu tahay 18 jir ama ka weyn xashiishad cannabis loo adeegsaday 2018. Tirada kuleylka maalinlaha ah waxay ahayd 220.000 oo qof wax badan ka sareeya marka loo eego sanadkii 2017. Markaas waxaa jiray 140.000 oo qof.
Cannabis ka dib, XTC waa daroogada ugu badan ee Nederland laga isticmaalo. 2018 oo qaangaar ah ayaa isticmaalay ecstasy sanadkii 380.000. Isticmaalka XTC wuxuu ku dhowaaday isla heer tan iyo 2015. Ku dhowaad 250.000 oo qof ayaa soo sheegay inay isticmaaleen daroogada kookeyn 2018. Isticmaalka ayaa ugu sarreeya ragga qaangaarka ah ee da'doodu u dhaxayso 25 iyo 29, dadka aqoonta sare leh iyo kuwa deggan magaalooyinka. Waa arrin naxdin leh in 2018 guud ahaan 224 qof ay u dhinteen cawaaqibka tooska ah ee isticmaalka daroogada. Taasi waa 38 ka yar tahay tii 2017.
Haddii aad isbarbar dhig ku sameysid tirooyinkaan iyo rabitaanka dowladda ee ah in laga hortago in si caadi ah loo isticmaalo isticmaalka maandooriyaha, tani waxay umuuqataa dagaal lumay. Halkii ay ka yareyn lahaayeen, ayaa dawooyin aad u tiro badan ayaa la isticmaalayaa. Kordhinta tirada tuubooyinka maalinlaha ah ayaa si gaar ah cajiib u ah.
Macluumaadka iyo ka hortagga
Iyada oo soo socota xidhitaanka silsiladda xashiishadda cannabis (oo loo yaqaan tijaabada haramaha) waxaa sidoo kale jira taxadar dheeraad ah oo ku saabsan ka hortagga iyo macluumaadka ku saabsan isticmaalka xashiishadda. Waxaa weheliya soo-qaadista baaritaanka haramaha ololaha macluumaadka qaran khataraha isticmaalka xashiishadda. Sidan oo kale, dawladdu waxay rabtaa inay ka hortagto tijaabinta haramaha sharciga ah inay caadi ka dhigto isticmaalka xashiishka. Feejignaan dheeri ah oo ku saabsan macluumaadka iyo ka hortagga waxay ila tahay wax wanaagsan aniga. Ololaha noocan oo kale ah si xun ayaa loogu baahan yahay, maxaa yeelay sanadihii ugu dambeeyay dowladda ayaa gabi ahaanba ku fashilantay arrintan. Sidaas darteed, tirada dadka sigaarka caba maalin walba aad ayey u kordheen. Ka dibna baaritaanka haramaha ayaan wali bilaabmin.
Waxaan si aad ah uga sii ogahay in soo-gelitaanka baaritaanka haramaha ay qaadanayso waqti dheer oo dheer. Dhamaadka bisha Diseembar 2019, dowladdu waxay ku dhawaaqday inay jiri doonto caddeyn dheeri ah bilowga sanadka 2020 oo ku saabsan qawaaniinta xakameynaya tijaabada weed. Hadda waa horraantii Maarso 2020 waxayna si aamusnaan leh ugu aamusnaanaysaa The Hague.
Halkii mudnaan la siin lahaa tijaabada haramaha iyo ololaha macluumaadka la xiriira, ayay dowladdu soo bandhigaysaa isbedel cusub oo ku saabsan Sharciga Opium: Mamnuucidda kooxo gaar ah oo maandooriyayaal cusub. Tan, dawladda ayaa ujeedadeedu tahay inay ilaaliso caafimaadka bulshada oo ay caqabad ku noqoto wax soo saarka iyo ka ganacsiga maandooriyaha cusub ee nafsadda. Kuwani waa walxaha si aad ah ula mid ah kuwa saameeya dawooyinka horey loo mamnuucay waxaana loo soo saaray si looga hortago sharciga daroogada. Waxay jiri kartaa ilaa iyo Abriil 20 ka jawaabey biilka, kaas oo loo gudbiyay wadatashi. Sharciga ayaa mamnuucaya seddex waxa loogu yeero "kooxaha maaddada", taas oo macnaheedu yahay in ficil ahaan dhammaan daawooyinka naqshadeeyayaasha ay hoos imaanayaan sharciga Opium. Waa, marka la soo koobo, toogashada maroodiga kaneeco mustaqbalka.
Qaar badan oo ka mid ah kheyraadkaas (oo ilaa maanta sharci ah) ayaa lagu iibiyaa smartshop. Dhammaan daroogooyinkaani dhowaan waxay noqon doonaan sharci-darro. Laakiin mamnuucitaanku macnaheedu maaha in dawooyinkan aan dib loo sii iibin doonin. Mamnuuciddu waxay kaliya xaqiijineysaa in daawooyinkan dhowaan lagu iibin doono wareegga sharci darrada ah, iyada oo aan la xaddidneyn da'da, macluumaadka ama xaddidaadaha kale. Waa si sax ah iibinta nidaamsan ee daawooyinka naqshadeeyayaasha ee hubiya alaabada la xakameynayo oo leh qadar cayiman oo maaddooyinka firfircoon. Xayiraadda adigu waad lumineysaa waxaas oo dhan. Intaa waxaa sii dheer, isticmaalka walxaha cusub ee cilmu-nafsiga ayaa ah mid la iska indhatiri karo marka la barbar dhigo saddexda walxaha ugu badan ee la isticmaalo (xashiishka, MDMA iyo kookaha). Intii ay mudnaan siin laheyd tan, dowladdu waxay soo bandhigeysaa mamnuucida daawooyinka naqshadeeyayaasha cusub ee aan xallin doonin wax uun, laakiin waxay qaadan doontaa waqti badan ugu dambeyntiina waxay u horseedi doontaa xaalado khatar ah qofka isticmaala. Haddii golaha wasiiradu runtii rabaan inay ilaaliyaan caafimaadka bulshada, markaa sharciyeyn dheeraad ah ayaa ah habka loo maro, maahan mamnuuc.
Xaaladda oo dhami waxay i xasuusineysaa ereyada caqliga leh ee Rabbi Ciise, ereyada ay tahay in Mudane Blokhuis iyo Grapperhaus ay qaadaan:
Maxaad u aragtay saxarka isha walaalkaa ku jira, oo aadan u fiirsan dogobka ishaada ku jira? Ama sidee baad walaalkaa ugu odhan doontaa, i daa, saxarka ishaada ku jira aan kaa saaree; oo bal eeg, ishaada dhexdeeda waxaa ku jira dogob. Labawejiile yahow, dogobka ishaada ku jira horta ka saar, goortaasaad bayaan u arkaysaa inaad saxarka isha walaalkaa ku jira ka saarto.
(Matayos 7, 3-5, RCV).
cannabiscocainedembigo'aan qaadashodaroogada naqshadeeyedaroogadaKHLAsharci ahaansharci-dejintamdmaNederlanddawooyinka caqliga lehmukhaadaraadka syntheticsharcigatijaabinta haramahabaaritaanka weedxtc
Oregon wuxuu sharciyeeyaa cilmu-nafsiga
Toddobaadkan, daroogada maskaxda ayaa laga sharciyeeyay Oregon. Tani waxay ka dhigaysaa gobolkii ugu horreeyay ee Ameerika ...
Dalabka baahida loo qabo daawada dabiiciga ah ee deriska bariga ah
Baahida loo qabo xashiishadda dawada ayaa saddex jibbaar ka dhacday Jarmalka. Tani waa qayb ahaan maxaa yeelay ...
Lalabbo lallabbo? Daraasad: Xashiishku wuxuu yareeyaa boqolkiiba 96 dadka saacad gudaheed
Isticmaalayaashu waxay ogaadaan gargaar muhiim ah waxayna ogaadaan in faa'iidooyinka ay sii kordhayaan waqti ka dib. ...
Tusaha Bilowga ee Doorashada E-Liquid-ka saxda ah
Xashiishadda '' Saamaynta Soo -Dhaweynta '' Waa Dhab, Saynisyahannadu Waxay Leeyihiin
Nin ka baxsaday xabsi oo loo xiray xashiishadda oo koraysay ayaa isu dhiibay 30 sano kadib
Saynisyahannadu waxay ku tijaabiyaan CBD gudaha Brazil ka-hortagga Astaamaha Muddada-dheer ee Sambabka COVID-19
Spain ayaa ansixisay dawadii ugu horeysay ee xashiish